ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပေါလစ်ဗျူရို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် H.E. Mr. Vuong Dinh Hue ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ | Ministry of Finance & Planning
Posted By : editor, Date : 18.06.20190comment
ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပေါလစ်ဗျူရို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်
H.E. Mr. Vuong Dinh Hue ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား 18.6.2019 ညနေ
(၄:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၆)၌
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ
ဖြစ်ကြသော ဦးမောင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးဆက်အောင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း
၂၀၁၈-၂၀၁၉ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရာတွင် နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အခြေခံမူနှင့် သတ်မှတ်ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ